၂၀၂၁ ခုနှစ်မတ်လတွင် TPE ၏မော်ဒယ်စာရင်းကိုမော်ဒယ်လ်စာရင်းတွင်တင်ထားသည်
We Shaoxing Huawo Auto Parts Co. , Ltd သည်ကားဖျာများထုတ်လုပ်ရာတွင်အထူးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကားဖျာများ၏မော်ဒယ်များကိုတတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်အဆင့်မြှင့်နိုင်သည်။ သင်လိုအပ်သောကားမော်ဒယ်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏မော်ဒယ်စာရင်းထဲတွင်မထည့်ပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့အားချက်ချင်းဆက်သွယ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့လျင်မြန်စွာပြီးအောင်လုပ်နိုင်သည်၊ သင် 3D လေဆာရှိပါကကြိုဆိုပါ၏။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကားကြမ်းခင်းဖျာများကိုဝယ်ရန်လိုအပ်သည့်အခါအကောင်းဆုံးထုတ်လုပ်သူကိုမည်သို့ရှာရမည်နည်း။ ဂူဂဲလ်ကို“ ကားဖျာစက်ရုံ” ဖြင့်ရှာဖွေနိုင်သည်။ ထို့နောက် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များစွာကိုသင်ရှာဖွေနိုင်သည်။ သင်လိုအပ်သည့်ကားဖျာစက်ရုံသည်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်ကိုသင်ဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောကြင်နာအိမ်ထောင်ဖက်ရှိပါတယ် ...
21-02-09 အပေါ် admin ရဲ့အားဖြင့်
ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများနှင့်ဂုဏ်သတ္တိများကားကြမ်းပြင်ဖျာကွဲပြားခြားနားသောအဝတ်လျှော်နည်းလမ်းများနှင့်အတူရှိ၏။ အဝတ်လျှော်ခြင်း၏မာကျောမှုသည်လည်းကွဲပြားခြားနားသည်။ ယခုအခါကားဖျာများမှာပုံမှန်အားဖြင့်ဤကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများ - ကော်ဇော၊ ရာဘာကားဖျာများ၊ PVC ကားဖျာများနှင့် TPE / TPR ကားဖျာများနှင့်ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ အဝတ်လျှော်ပေါ်ကဘာနဲ့ကွာခြားသလဲဆိုတာရှင်းပြပါရစေ။
သင့်ကားကြမ်းခင်းဖျာများကိုနှစ် ၂၀ ကြာအောင်ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ။
သင်မိခင်တစ် ဦး ဖြစ်လာသည့်အခါသင်မိသားစုတွင်ရှိသူတိုင်းဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်ရန်သင်နေ့စဉ်အလုပ်များနေပေမည်။ သင်၏အခန်းကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်အချိန်မရှိ၊ သင်၏ကားကိုလည်းသန့်ရှင်းရန်အချိန်မရှိ။ အချိန်ဆိုတာအရာအားလုံးကိုဆိုလိုတယ်၊ သင်ကတစ်မိနစ်ကိုတောင်မစောင့်နိုင်ဘူး၊ အနားယူဖို့နည်းလမ်းရှာဖို့လိုတယ်။ ဟိုမှာ ...
သင်ကားသစ်တစ်လုံး ၀ ယ်သောအခါသင်ကားတစ်စီးဖျာဝယ်ရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ Huawo auto parts Co. , Ltd သည်သင့်ကား၏အတွင်းပိုင်းကိုကာကွယ်ရန်အမျိုးမျိုးသောကားဖျာများနှင့်ပင်စည်ဖောင်များကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးကြမ်းခင်းဖျာများကိုမိတ်ဆက်ပေးမည်။ သင့်အတွက်။ ငါ့မော်တော်ယာဉ်နှင့်အဘယ်ကားကြမ်းပြင်ခင်းသည်? မင်းတို့ငါတို့လာလည်တဲ့အခါ ...
20-12-30 အပေါ် admin ရဲ့အားဖွငျ့ဖွစျသညျ
Huawo Auto Parts Co. , Ltd သည် TPE ကားဖျာစက်ရုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ Toyota၊ Honda၊ Land Rover၊ BMW၊ Jeep, Porsche၊ Mercedes-Benz၊ Chevrolet၊ Cadillac၊ Ford, Nissan, Lexus, Audi၊ , Mitsubishi Motors, Bui ...
အဘယ်ကြောင့် TPE ပစ္စည်းမော်တော်ယာဉ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်သုံးနိုင်သည်
ရှေးခေတ် sedan ထိုင်ခုံများနှင့်ရထားများမှသည်ခေတ်သစ်ကားများအထိလူများ၏လမ်းလျှောက်ကိရိယာများသည်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေရန် TPE ကားဖျာစက်ရုံသည်အများပြည်သူမြင်ကွင်းတွင် TPE ကားဖျာများကိုထုတ်လုပ်သည်။ Thermoplastic elastomer TPE သည်ဆီဖြူနှင့်ရောစပ်ထားသော SEBE အခြေခံပစ္စည်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
TPE ကားဖျာပစ္စည်း: TPE ကားဖျာပစ္စည်း၏အားသာချက်များကဘာတွေလဲ။
TPE သည်ကုန်ကြမ်းအမျိုးအစားအသစ်ဖြစ်ပြီးမြင့်မားသော elasticity နှင့် compression strength ရှိသည်။ ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အပြောင်းအလဲမြန်ခြင်း၏ကွဲပြားခြားနားမှုအရ TPE ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ယခုအခါ TPE ကြမ်းခင်းဖျာများသည်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ထုတ်ကုန်နယ်ပယ်တွင်အဓိကကုန်ကြမ်းတစ်ခုဖြစ်လာပြီးဖြစ်သည်။
နေ့စဉ်ကားမောင်းရာတွင်ကားဖျာသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ နိုင်ငံအနှံ့အပြားတွင်ကားချောဆန့်ခြင်းနှင့်ကားကိုယ်ထည်ကိုကာကွယ်ခြင်းတာ ၀ န်ယူသည်။ ရိုးရာသားရေကားဖျာသည်ရေစိုခံအကျိုးသက်ရောက်မှုမှာယေဘုယျအားဖြင့်၊ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဆင်းရဲသား unde ...
ကားကြမ်းခင်းသည်ပိုင်ရှင်တိုင်းနှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိသည်။ 4S ကားဆိုင်မှလက်ဆောင်တစ်ခုအဖြစ်သော်လည်းကောင်း၊ ကိုယ်တိုင်ဝယ်ယူပါစေကားဖျာသည်သင်လိုအပ်သည့်ပထမဆုံးမော်တော်ကားအတွင်းပိုင်းဖြစ်သည်။ ကားကြမ်းခင်းထဲမှကား၊ ရေစိုခံ၊ အညစ်အကြေး၊ စလစ်ကာကွယ်မှု၊ အကာအကွယ်ပေးသည့်စုဆောင်းမှုတစ်ခုအနေဖြင့် ...
နေ့စဉ်မြေပြင်နှင့်နီးကပ်စွာ၊ Automotive အချက်အချာကိုမည်သို့ရှင်းလင်းရမည်နည်း။
ကားသည်လမ်းလျှောက်ကိရိယာတစ်ခုအနေဖြင့်စတင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်နေ့စဉ်အပြင်ဘက်သို့ ထွက်၍ မြေပတ်ဝန်းကျင်ပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ အချို့သောနေရာများတွင်ရွှံ့များသို့မဟုတ်ဖုန်မှုန့်များအလွန်ညစ်ပတ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ကား၏အချက်အချာမှာအလွန်ညစ်ပတ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့မခံရပ်နိုင်ပါ။ မော်တော်ကားအချက်အချာကိုဘယ်လိုရှင်းရမလဲ။ Shaoxing Huawo မော်တော်ကားအစိတ်အပိုင်းများကိုခွင့်ပြုပါ ....
20-12-02 အပေါ် admin ရဲ့အားဖွငျ့ဖွစျသညျ
ယခုမိသားစုအားလုံးနီးပါးတွင်ကားတစ်စီးပိုင်ဆိုင်လာပြီးကားပိုင်ရှင်တိုင်းကသူ့ကားကိုနှစ်သက်ကြသည်။ ကားကိုသန့်ရှင်းအောင်ထိန်းသိမ်းရန်သူတို့သည်ကားဆက်စပ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကို ၀ ယ်ကြလိမ့်မည်။ ကားခြေဖျာများသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်၊ သို့သော်ကားကြမ်းပြင်အထူမှာလည်းဖြစ်သည်။ ကွဲပြားခြားနား, ဒါကြောင့်အဘယ်သင့်လျော်သည်? မော်တော်ကားခြေထောက်ဖျာသည်ကွဲပြားခြားနားသည် ...
TPE ကားဖျာမော်ဒယ်စာရင်းကိုမတ်လတွင် ...